सचिन परियार पहिलो पटक स्टेज कार्यक्रममा : रविना पनि उतै व्यस्त !(भिडियो सहित) – Ramailo Sandesh
सचिन परियार पहिलो पटक स्टेज कार्यक्रममा : रविना पनि उतै व्यस्त !(भिडियो सहित)
पछिल्लो समय निकै नै भाईरल बनेका बाल गायक सचिन परियार पहिलो पटक स्टेज कार्यक्रममा देखिएका छन् ।यस अगाडी विभिन्न लोकगीत सगींत तथा मेरी बास्सैमा समेत अभिनय गरेर चर्चामा आएका सचिनले पहिलो स्टेज कार्यक्रम गरेका हुन् । कोरोनाका कारण रोकिएको स्टेज कार्यक्रम पछिल्लो समय विस्तारै कोराना सक्रंमण कम हुन थालेपछि हुन थालेका छन् ।
उनले पहिलो स्टेज कार्यक्रम दाङमा प्रस्तुत गरेका हुन् । यसका लागि सचिनले तैयारीका कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । सचिनले फाल्गुण २९ गते दाङको तुल्सीपुरमा भएकाे भोटे मेलामा उनी सहभागी भएका हुन् ।
उक्त कार्यक्रमा राष्ट्रिय लोक गायक बद्री पगेंनी,चन्द्र शर्मा, पशुपती शर्मा,रमेश राज भट्टराई,पुष्कल शर्मा लगायतका कलाकारहरु पनि सहभागी बन्दैछन् । उक्त कार्यक्रममा सचिनसगैं उनका बुबा तेजेन्द्र परियार चर्चित लोक दोहोरी गायक अमृत सापकोटा पनि कार्यक्रममा उपस्थित थिए ।
सचिन परियारको यो पहिलो स्टेज कार्यक्रम हो । सचिनको लोकसगींतमा स्टेज कार्यक्रमा पनि माग बढ्दै जान थालेको छ । यसैबीच चर्चित बाल गायिका रविन बसेलले पनि उक्त कार्यक्रममा प्रस्तुती दिँदै छिन् । बसेलले पनि उक्त कार्यक्रममा स्टेज मार्फत प्रस्तुती दिएकी छन् ।
सचिन र रविना दुबै ईन्द्रेणीका कलाकारको रुपमा स्थापित भएका छन् । सचिन परियार गुल्मी छाडेपछि पछाडी फर्केर हेर्नपरेको छैन् । उनले सानै उमेरमा नेपाली लोकसगींतको क्षेत्रमा एउटा छाप छोड्न सफल भएका छन् । ढिलो गरी विद्यालय पढ्न थालेका उनले विद्यालय नै प्रथम गर्न सफल भएका थिए ।
उनको प्रतिभा देखेर ईन्द्रेणीले उनलाई निशुल्क पठन पाठनको व्यवस्था मिलाएको थियो ।
शुभाकर खड्का दू र्व्य व हा र प्रकरण वि’रुद्ध बोल्दै अमेरिकी रास्ट्रपति जो बाइडेनले भने…